AC3 Files ee aan shaqada ku Mavericks? Just Play AC3 on Mavericks Halkan
> Resource > Video > AC3 Files ee aan shaqada ku OS X Mavericks?
AC3 Files ee aan shaqada ku OS X Mavericks?
Ka dib marka aad soo dajiyo Mavericks, QuickTime ciyaara qaar ka mid ah files video sida MKV sawirka laakiin codka lahayn? Taasi waa badan tahay, maxaa yeelay waxaa ku jira faylasha aad AC3 audio. AC3 audio lama jaanqaadi Mavericks. Sidaas, haddii aad leedahay qaar ka mid ah files in suddently aamuseen on QuickTime sida ugu dhaqsaha badan aad u cusboonaynta in Mavericks, aad u baahan tahay si uu u xaliyo dhibaatada ku saabsan AC3 audio jebiyey on Mavericks.
Mid ka mid ah xalka waa in aad lacag la'aan ah karo download iyo rakibi Wondershare Player u Mac inuu u ciyaaro videos on your Mac. Software waa la jaan qaada Mavericks, iyo vertually ciyaari karo video xalinta sare.
Si kastaba ha ahaatee, Wondershare Video Converter u Mac sidoo kale ka dhigaysa karo fudud oo degdeg badan si ay u xaliyaan dhibaatadan iyadoo diinta AC3 audio ee video files in MP3 audio shaqeeya kartaan on Mavericks. Hawlaha qaab beddelidda ma ka dhigi doonaa wax kasta oo video iyo khasaaro audio. Ka dib markii in, waxaad la video asalka iyo tayada audio ciyaari karo files ku QuickTime. Geedi socodka dhan yahay muddo seddex talaabooyin fudud. Haddaba waan ku baryayaaye i raaca inay ciyaaraan AC3 on Mavericks si habsami leh.
1 dejinta files la codec AC3
Videos Import files leh AC3 audio (AC3 files audio ayaa sidoo kale taageeray) si Converter AC3 this u Mavericks. Si aad u sameyso, waxaad laba doorasho. Ama u tag "File"> "Load Media Files" menu in ay dajiyaan aad files deegaanka ama si toos ah kuwaa oo si app this.
2 Dooro MP3 format audio sida wax soo saarka
Marka hore, guji qaab icon ugu hooseysa uu u furo liiska qaabka wax soo saarka this app ee. Markaas, hoos ku qoran ee aad sameyn kartid:
Wixii AC3 files audio, waxaad u tagi kartaa "Audio"> "MP3".
Wixii video files leh audio AC3 (Halkan, waxaan qaadan MKV tusaale ahaan), waxaad tagi kartaa "Video"> "MKV". Markaas, riix icon marsho ee geeska sare ee midigta ah si ay u dejiyaan MP3 sida encoder codka doorasho qaabka.
3 Beddelaan AC3 in MP3 on Mavericks
Just ku dhufatey "Beddelaan" button inuu ku soo bilowdo qaab beddelidda. Ka dib markii inta ka dib, waxaad ka heli kartaa kuwan files audio MP3 gediyay ama video files leh MP3 codec galka wax soo saarka. Hadda, kaliya dajiyaan mid ka mid ah ciyaaryahanka QuickTime for loo maqli karo. Sidaas, waxaad ka ciyaari kartaa AC3 audio on Mavericks iyadoo wax dhibaato ah.
Sidee baan ku rakiban kartaa QuickTime 7 Or Pro Wixii OS X Mavericks?
Sida loo Beddelaan DTS in AC3
Sida loo dar MKV metadata for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
Sida loo Download Streaming Audio la taariikhqorihii ah Audio
Sida loo Edit DAT Video Files
Sida loo Beddelaan iyo Guba HD Video inay DVD (Windows 10 ka mid ah)